Odayaasha Waqooyiga Oo Iska Fogeeyay Liiska Ay Dowlada Soo Saartay | Anti-Tribalism
← U gurmo Abwaan Axmedey Cabdi Gaashaan oo Muqdisho ku xanuunsanaya
Gardarrada Gaas oo laga wada gilgishay! →
Odayaasha Waqooyiga Oo Iska Fogeeyay Liiska Ay Dowlada Soo Saartay
07 May, 2012 – Xubno ka tirsan Madaxda dhaqanka Beelaha Somaliland oo magacyadooda lagu soo daray Liiska Madaxda dhaqanka Soomaaliyeed ee loo qorsheeyey inay soo xulaan Ergada ansixin doonta Dastuurka qabyo-qoraalka ah ee Soomaaliya oo Sabtidii ka furmay magaalada Muqdisho, ayaa ka hadlay magacyadooda liiskaa lagu soo saaray oo ay ku sheegeen kuwo laga been-abuuray.
Chief Caaqil Cali Xirsi Axmed iyo Suldaan Xuseen Xaaji Cabdi Cabdillaahi oo ka tirsan Madax-dhaqmeedka Somaliland qaarkood oo lagu soo daray liiska Odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee loo qorsheeyey inay soo xulaan Ergooyinka ansixinaya dastuurka cusub ee Soomaaliya, oo maanta shir jaraa’id oo kala gooniya ku qabtay magaalada Hargeysa, ayaa sheegay in magacyadooda laga been-abuuray oo aanay wax-ba kaga jirin arrintaas Dastuurka Soomaaliya, isla markaana ay layaanban yihiin magacyadooda waxa liiska loogu qoray iyo cidda ku qortay-ba oo ay xuseen inaanay waxba kala socon qaabka magicyadoodu liiskaas oo Warbaahinta Soomaaliya iyo ta Somaliland-ba faafiyeen maanta illaa xalay.
“Horta anigu ma ihi Ragga sheegta magac aanu lahayn oo Suldaan ma ihi ee waxaan ahay Chief Caqil, Dadkuna way iyaqaannaan, caan-na waan ahay. Arrinta ka dhacaysa Xamar waxaan u haystaa inay tahay Dad ay baahi shaqsi ahi geysay, sidaan ku ogahay qaar ka mida oo waxa geysay baahi nafteed oo ay kula carareen Muqdisho, iyada oo lagu yidhi wax-baa laga helayaa.” Sidaas ayuu yidhi Chief Caaqil Cali Xirsi Axmed.
Waxaanu intaa ku dari; “Ninka aniga wakiilka la iiga dhigay ee la yidhi wakiil ayuu u yahay, reerka aan Caaqilka u ahay Magaciisa oo saddexani kuma jiro, mid dhintayna kuma jiro, mid noolna kuma jiro marka hore-ba. Warqadan aynu immika aragnay ayuun baa iga hortimid ee waa la I yaqaannaa inaanan ahayn Nin dhac-dhaca oo ku dhac-dhaca dhulka qaarkii, reer Xamarkuna way I yaqaannaan halkanna way I taqaannaa. sidaa tarteed, waxba kalama socdo oo waa arrinta caynkaas ah. Ninkuna maaha magaciisu, magac reerka aan caaqilka u ahay oo reerku wuu ii diiwaangeshan yahay oo ninka magacaas leh kuma jiro reerka waxa la yidhaahdaa Maxamuud Faarax Maxamuud Maxamed.”
“Ninkaas wakhtiga la helo waxa lagu qadayaa sharciga oo Saladiinta Somaliland waatii sharciga ka soo saartay oo ninka tagaa waa danbiile oo waxa uu noogu qoran yahay danbiile. Cali Xirsi Axmed ayaan ahay oo waxaan ahay Chief Caaqil, arrintaas magacayga lagu daray Liiska Odayaasha dhaqanka ee Ergada Dastuurka soo xulaysa waxba kama jiraan, waxna kama ogi.” ayuu yidhi Chief Caaqil Cali Xirsi.
Chief Caaqil Cali Xirsi Axmed oo hadalkiisa sii wataa waxa uu intaa ku daray oo uu yidhi; “Waxa sababaayaa waxa weeye Dad meel waayey oo is-ka caddilan ayaa doonaya dad ay urur-sadaan oo magac ay ku uruur-sadaan Dir iyo waxyabahaas oo kale. Dad baahanna wayimayan oo xoogaa lacaga loo dhiibo oo magacyadu sidaas ayey noqonayaa, markaa waxa halkaas tagaan wax Somaliland-ba quseeya maaha iyo mid wax yeelo naguhaya midna maaha.
Dadka qaar ka mida Xamar way taqaannaa oo markay doonayaan inay wax ka been-abuuraan waxay doontaan Nin wax ku ool ah, si adduunka looga maqlo oo waxba ka socon mayaan. Rag fara badan oo halkan ku qoran oo maanta ila jooga ayaa jira oo reer Somaliland ah, ee waxaan u qadanayaa waxa weeye in adduunka laga maqlo Cali Xirsi Axmed ayaa ku jira oo Suldan hebel baa ku jira iyo hebel kale ayaa ku jira waxaasina waa been-abuur la sameeyay oo waxba kama jiraan liiskan la soo qoray oo waxa idiin marqaati ah dadka la soo qoray oo dhami waxay joogaan halkan Somaliland.”
Geesta kale, Suldaan Xuseen Xaaji Cabdi Cabdillaahi oo ka mid ah Salaaddiinta beelaha gobolka Hargeysa, oo isaguna ka mid ahaa Madaxda dhaqanka Somaliland ee magacyadooda lagu soo daray Liiska Odayaasha dhaqanka Soomaalida ee soo xuli doona ergada ansixinaysa Dastuurka cusub ee Soomaaliya yeelanayso, ayaa sheegay inaanu jirin wax shir ah oo Soomaaliya ah oo uu tagayo ama lagu casuumay.
Suldaan Xuseen X. Cabdi Cabdillaahi, waxa uu ku dooday inaanu waxba ka ogayn Liiska magiciisa lagu soo daray ee Salaaddiin badan oo Soomaaliya iyo Somaliland-ba isugu jira magacyadooda lagu soo daabacay, isla markaana loo qorsheeyey inay ka mid noqdaan Odayaasha dhaqanka Soomaalida ee soo xulaya Ergada dastuurka meel-marin doonta.
“Saaka markii aan kacay ayaa la ila soo hadlay oo la ii sheegay in magacaygu ku jiro liiska Salaaddiin tagaya Muqdisho oo dawladda Soomaaliya casuuntay. Waxaan caddaynayaa inaanu jirin baahina aanan u qabin inaan tago shirarka dalka Soomaaliya. Ma jiro shir la igu casuumay ama aan aniguba tagayaa oo Soomaaliya ah, mana jirto wax iga khuseeya arrimaha dalkaasi..” sidaa ayuu yidhi Suldaan Xuseen X. Cabdi Cabdillaahi.